Mateyu 21 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
21 Ngoko, bakusondela eYerusalem baza bafika eBhethefage kwiNtaba yemiNquma, uYesu wathumela abafundi ababini,+ 2 esithi kubo: “Yiyani kwidolophana ephambi kwenu, yaye kwaoko niya kufumana iesile libotshelelwe, linenkonyana lalo; wakhululeni nize niwazise kum.+ 3 Kwaye ukuba uthile uthetha nantoni na kuni, nize nithi, ‘Ayafuneka eNkosini.’ Uya kuwathumela ngoko nangoko.” 4 Oku okunene kwenzeka ukuze kuzaliseke oko kwathethwa ngomprofeti, esithi: 5 “Xelelani intombi yaseZiyon nithi, ‘Khangela! UKumkani wakho uza kuwe,+ enomoya wobulali,+ yaye ekhwele iesile, ewe, inkonyana le-esile, inzala yeqegu.’”+ 6 Ngoko abafundi bangena endleleni baza benza njengoko uYesu ebebayalele. 7 Yaye balizisa iesile nenkonyana lalo, babeka izambatho zabo zangaphezulu phezu kwawo, waza wahlala phezu kwazo.+ 8 Inkoliso yesihlwele yandlala izambatho zayo zangaphezulu+ endleleni, ngoxa abanye bagawula amasebe emithini, bawandlala endleleni.+ 9 Ke zona izihlwele, ezo zazihamba phambi kwakhe nezo zazimlandela zaziqhubeka zidanduluka zisithi: “Siyathandaza,+ sindisa uNyana kaDavide!+ Usikelelwe lowo uza egameni likaYehova!+ Siyathandaza, msindise kwiindawo eziphakamileyo phezulu!”+ 10 Ke kaloku akungena eYerusalem,+ isixeko siphela saqungaqungeka, sisithi: “Ngubani na lo?” 11 Izihlwele zaqhubeka zibaxelela zisithi: “Lo nguYesu umprofeti,+ ongowaseNazarete yaseGalili!” 12 Waza uYesu wangena etempileni, waphosa phandle bonke abo babethengisa nababethenga etempileni, wazibhukuqa iitafile zabatshintshi bemali nezihlalo ezide zabo babethengisa amahobe.+ 13 Wathi kubo: “Kubhaliwe kwathiwa, ‘Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu yomthandazo,’+ kodwa nina niyenza umqolomba wabaphangi.”+ 14 Ngoko, abantu abaziimfama nabaziziqhwala beza kuye etempileni, waza wabaphilisa. 15 Bathe ke ababingeleli abaziintloko nababhali bakuzibona izinto ezimangalisayo awazenzayo+ namakhwenkwe awayedanduluka etempileni esithi: “Siyathandaza,+ sindisa uNyana kaDavide!”+ bacaphuka 16 baza bathi kuye: “Uyakuva na oko kutshiwo ngaba?” UYesu wathi kubo: “Ewe. Anizange nikufunde na oku,+ ‘Emlonyeni weentsana nabanyayo ulungiselele indumiso’?”+ 17 Kwaye ebashiya ngasemva waphuma ngaphandle kwesixeko waya eBhethani waza wachitha ubusuku apho.+ 18 Ngoxa wayebuyela esixekweni ngonyezi, walamba.+ 19 Yaye wabona umkhiwane ngasendleleni waza waya kuwo, kodwa akazange afumane nto+ kuwo ngaphandle kwamagqabi kuphela, wathi ke kuwo: “Makungaze kuphume siqhamo kuwe ngonaphakade.”+ Waza umkhiwane wabuna ngephanyazo. 20 Kodwa abafundi bakukubona oku, bamangaliswa, besithi: “Kwenzeka njani ukuba umkhiwane ubune ngephanyazo?”+ 21 Waphendula uYesu wathi kubo: “Inene ndithi kuni, Ukuba nje ninokholo yaye anithandabuzi,+ aniyi kwenza oko ndikwenze emkhiwaneni kuphela, kodwa ukuba nithi kule ntaba, ‘Funquka uze uphoseke elwandle,’ kuya kwenzeka.+ 22 Kwaye zonke izinto enizicela emthandazweni, ninokholo, niya kuzifumana.”+ 23 Uthe akuya etempileni, ababingeleli abaziintloko namadoda amakhulu abantu beza kuye ngoxa wayefundisa baza bathi:+ “Uzenza ngagunya liphi na ezi zinto? Yaye ngubani na okunike eli gunya?”+ 24 Waphendula uYesu wathi kubo: “Nam, ndiza kunibuza into enye. Ukuba niyandixelela, nam ndiza kunixelela ukuba ndizenza ngagunya liphi na ezi zinto:+ 25 Ubhaptizo lukaYohane, lwaluvela kuwuphi umthombo? Ezulwini okanye ebantwini?”+ Kodwa baqiqa ngelithi: “Ukuba sithi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uya kuthi kuthi, ‘Kutheni, ke ngoko, ningazange nimkholelwe?’+ 26 Ukuba, ngoko, sithi, ‘Lwaluvela ebantwini,’ soyika isihlwele,+ kuba bonke babambe ukuthi uYohane ngumprofeti.”+ 27 Ngoko bamphendula uYesu bathi: “Asazi.” Waza wathi kubo: “Nam andinixeleli ukuba ndizenza ngagunya liphi na ezi zinto.+ 28 “Nithini nina? Umntu wayenabantwana ababini.+ Waya kowokuqala, wathi, ‘Mntwana, hamba uye kusebenza esidiliyeni namhlanje.’ 29 Waphendula wathi, ‘Ndiza kuya, mnumzana,’+ kodwa akazange aye. 30 Waya kowesibini, watsho okufanayo. Waphendula wathi, ‘Andizi kuya.’ Emva koko wazisola+ waza waya. 31 Nguwuphi kwaba babini owenza ukuthanda kukayise?”+ Bathi: “Ngulo wamva.” UYesu wathi kubo: “Inene ndithi kuni banihambela phambili abaqokeleli berhafu namahenyukazi ukungena ebukumkanini bukaThixo. 32 Kuba uYohane weza kuni ngendlela yobulungisa,+ kodwa anizange nimkholelwe.+ Noko ke, abaqokeleli berhafu namahenyukazi bamkholelwa,+ yaye nina, nangona nakubonayo oku, anizange nizisole emva koko ukuze nimkholelwe. 33 “Yivani omnye umzekeliso: Kwakukho umntu, umnini-ndlu,+ owatyala isidiliya, wasibiyela ngothango, wemba isixovulelo sewayini kuso, wamisa inqaba,+ waqeshisa ngaso kubalimi, waza wahambela kwenye indawo.+ 34 Lakufika ixesha lesiqhamo, wathumela amakhoboka akhe kubalimi ukuya kuthabatha iziqhamo zakhe. 35 Noko ke, abalimi bawathabatha amakhoboka akhe, elinye balibetha kanobom, elinye balibulala, elinye balixuluba ngamatye.+ 36 Kwakhona wathumela amanye amakhoboka, amaninzi kunawokuqala, kodwa benza okufanayo nakuwo.+ 37 Okokugqibela wathumela unyana wakhe kubo, esithi, ‘Baya kumhlonela unyana wam.’ 38 Bakubona unyana abalimi bathi, ‘Yindlalifa le;+ yizani, siyibulale size sifumane ilifa layo!’+ 39 Bamthabatha, bamphosa ngaphandle kwesidiliya baza bambulala.+ 40 Ngoko ke, xa umnini-sidiliya efika, yintoni aya kuyenza kwabo balimi?” 41 Bathi kuye: “Ngenxa yokuba banobubi, uya kuzisa intshabalaliso embi+ phezu kwabo aze aqeshise ngaso isidiliya kwabanye abalimi, abaya kumnika iziqhamo xa sele zilungile.”+ 42 UYesu wathi kubo: “Anizange nifunde na eZibhalweni ukuba, ‘Ilitye abaligatyayo+ abakhi lilo elaba lilitye lembombo eliyintloko.+ Oku kuvela kuYehova, yaye kuyamangalisa emehlweni ethu’? 43 Kungenxa yoku le nto ndisithi kuni, Ubukumkani bukaThixo buya kuthatyathwa kuni buze bunikwe uhlanga oluvelisa iziqhamo zabo.+ 44 Ke, umntu owa phezu kweli litye uya kutyumka. Nabani na eliye lamwela, liya kumcola.”+ 45 Bakuba ababingeleli abaziintloko nabaFarisi beyivile imizekeliso yakhe, baphawula ukuba wayethetha ngabo.+ 46 Kodwa, nangona babefuna ukumbamba, babesoyika izihlwele, ngenxa yokuba zazibambe ukuthi ungumprofeti.+